Refrigerator NR-BV320XS - Panasonic
တံခါး2ပေါက်ပါ အောက်ခြေ ရေခဲခန်းဖြင့် ရေခဲသေတ္တာ NR-BV320XS
အသား၊ ငါးများကို7ရက်ကြာသည်အထိ လတ်ဆတ်နေစေသည်
Panasonic ရေခဲသေတ္တာများသည် နေ့စဉ် လန်းဆန်းမှုကို ရရှိစေရန် ကျန်းမာရေးနှင့် ညီညွတ်သော နေထိုင်မှုဘဝပုံစံများကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။ Prime Fresh -3ºC နူးညံ့စွာ အေးခဲခြင်းသည် အစားအစာများကို လတ်ဆတ်၍ အာဟာရ ပြည့်ဝစေပြီး ရေခဲအရည်ပျော်အောင်လုပ်ရန် မလိုအပ်သောကြောင့် လွယ်ကူစွာ ချက်ပြုတ်ပြင်ဆင်နိုင်သည်။
Prime Fresh+ က အစားအစာများကို ပို၍မြန်မြန် နူးညံ့စွာ အေးခဲခြင်းဖြင့် လတ်ဆတ်မှုရှိအောင် ထိန်းသိမ်းပေးသည်
Prime Fresh သည် အသားငါးများကို ခန့်မှန်းခြေ -3°C ၌ ညင်ညင်သာသာ အေးခဲပေးသည်။
ဤနည်းဖြင့် အစားအစာကို နူးညံ့စွာ အေးခဲထားခြင်းက ရေခဲကို အရည်ပျော်အောင် လုပ်စရာမလိုဘဲ လတ်ဆတ်မှုကို7ရက်ခန့်*² ထိန်းသိမ်းပေးသည်။
အစားအစာကို လေးဆခန့်ပိုမိုမြန်ဆန်အောင် နူးညံ့စွာ အေးခဲရန် Prime Fresh+ စနစ်ကို ရွေးချယ်ပါ။*¹
Prime Fresh+ ဖြင့် ကျန်းမာရေးနှင့် ညီညွတ်သော အစားအစာများကို နေ့စဉ်ချက်ပြုတ်ပါ
လတ်ဆတ်မှုကို ကြာရှည်ခံအောင် ထိန်းသိမ်းပေးသည်
Prime Fresh သည် အစားအစာများကို နူးညံ့စွာ အေးခဲပေးပြီး တောင့်တင်းသွားခြင်းမရှိဘဲ လတ်လတ်ဆတ်ဆတ်ဖြစ်နေအောင် ထိန်းသိမ်းပေးရန် ခန့်မှန်းခြေ -3°C လေစီးဆင်းမှုကို အသုံးပြုသည်။
Prime Fresh သည် အသား၊ ငါးများ၏ အာဟာရဓာတ်နှင့် အရသာများကို ထွက်မသွားအောင် ထိန်းသိမ်းပေးပြီး တစ်ကိုက်ချင်းစီတိုင်းတွင် ကောင်းမွန်သော အာဟာရဓာတ် အရသာကို ခံစားစေနိုင်သည်။
Prime Fresh သည် ပါဝင်ပစ္စည်း တစ်ခုချင်းစီကို ရေခဲအရည်ပျော်အောင် လုပ်စရာမလိုဘဲ အဆင်သင့် လှီးဖြတ်နိုင်ရန်အတွက် နူးညံ့စွာ အေးခဲပေးသည်။
နူးညံ့စွာ အေးခဲထားသော အစားအစာကို အသုံးပြုရန် အလွယ်တကူ သီးခြားခွဲပြီး တစ်ခုချင်းစီ စားသောက်နိုင်သည်။
နူးညံ့စွာ အေးခဲထားသော ချက်ပြုတ်ထားသည့် အစားအစာကို လိုချင်သည့် ပမာဏအလျောက် အလွယ်တကူ ခူးခပ်နိုင်သည်။
ပိုမိုမြန်ဆန်စွာ ဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင်ဖြင့် နယ်နှပ်ခြင်း
ခန့်မှန်းခြေ -3°C တွင် သိမ်းဆည်းထားသည့် အမွှေးအကြိုင်ခတ်ထားသော အစားအစာများအတွက် အနံ့အရသာကို ပိုမိုမြန်ဆန်အောင် စိမ့်ဝင်စေရန် အခန်းငယ်များအကြားတွင် အပေါက်များ ဖွင့်ထားသည်။
ဘက်တီးရီးယား ကာကွယ်မှု အစွမ်း
ငွေ အိုင်ယွန်များသည် Ag စစ်ထုတ်ကိရိယာတွင် ဘက်တီးရီးယား ပေါက်ဖွားမှုနှုန်းကို 99.9%*³ လျှော့ချပေးပြီး အနံ့ဆိုးများကို ဖယ်ရှားပေးသည်။
ECONAVI INVERTER စနစ်က လုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုချင်းစီကို သင့်လူနေမှုပုံစံနှင့်ကိုက်ညီအောင် ပြုလုပ်ပေးသည်
အသုံးပြုမှု အခြေအနေများကို စိစစ်ပြီး အအေးခံခြင်း လုပ်ဆောင်ချက်ကို အကောင်းဆုံး ချိန်ညှိပေးသည်
ECONAVI အာရုံခံစနစ် အမျိုးအစား လေးမျိုးသည် သင်၏ ရေခဲသေတ္တာ နေ့စဉ်အသုံးပြုမှုကို စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးပြီး သင် ၎င်းကို အများဆုံး အသုံးပြုသည့်အချိန်၊ သင် အသုံးပြုသည့် အကြိမ်အရေအတွက်ကဲ့သို့ လူနေမှုပုံစံများကို3ပတ်တာ မှတ်တမ်းတင်ထားသည်။
ECONAVI သည် စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုတွင် လေလွင့်ဆုံးရှုံးမှုမှန်သမျှကို လျှော့ချရန် ခန့်မှန်းဒေတာအရ သင့်လျော်သော ပါဝါထိန်းချုပ်မှုကို သုံးစွဲသည်။
*1 စမ်းသပ်မှု အခြေအနေများ -- ပတ်ဝန်းကျင် အပူချိန်- 32°C၊ ဟာ့ဇ်- 50Hz၊ ဗို့အား- 220V၊ စမ်းသပ်ထားသော မော်ဒယ်- NR-BC369-V2/ အပူချိန် ဆက်တင် -- ရေခဲသေတ္တာ- အသင့်အတင့်၊ ရေခဲခန်း- အသင့်အတင့်၊ Prime Fresh- Prime Fresh+/ ပုံမှန် Prime Fresh/ စမ်းသပ်ထားသော အစားအစာ- ရေခဲသေတ္တာ (ခန့်မှန်းခြေ 4°C) တွင် သိမ်းဆည်းထားသော အမဲသား 200g နှင့် အခန်းတွင်း အပူချိန် (ခန့်မှန်းခြေ 26°C) တွင် သိမ်းဆည်းထားသော အမဲသား 200g / စမ်းသပ်မှု ပုံစံ- ရေခဲသေတ္တာကို တည်ငြိမ်သော အခြေအနေတွင် ဖွင့်ထားပြီးနောက် Prime Fresh ရေခဲသေတ္တာခန်းတွင် အမဲသားနှစ်မျိုးလုံးကို ထည့်ခဲ့သည်။ အအေးခံနှုန်းအတွက် အချိန်ကို Prime Fresh+ စနစ်နှင့် ပုံမှန် Prime Fresh+ စနစ်နှစ်ခုကြား 4°C/26°C မှ -1.5°C ထိ နှိုင်းယှဉ်ခဲ့သည်။
*2 Panasonic က ပြင်ဆင်ထားသော ဒေတာ။ အသုံးပြုမှု အခြေအနေများ၊ သိမ်းဆည်းထားသော အစားအစာ အမျိုးအစား၊ အခြေအနေနှင့် ပမာဏပေါ် မူတည်၍ ထိရောက်မှု ပြောင်းလဲနိုင်သည်။
*3 စမ်းသပ်သည့် အဖွဲ့အစည်း- Boken အရည်အသွေး အကဲဖြတ်မှု အဖွဲ့အစည်း။ စမ်းသပ်သည့် ပိုးမွှားဗီဇများ- Staphylococcus aureus၊ Escherichia coli။ ယင်းသည် ဤဘက်တီးရီးယားများကြောင့် ဖြစ်ပွားသည့် ရောဂါများကို ကာကွယ်ပေးသည်ဟု ဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ပါ။ စမ်းသပ်သည့် နည်းလမ်း- JIS L 1902 အရေအတွက်အရ စမ်းသပ်မှု (ဘက်တီးရီးယား ပျော်ရည်စုပ်ယူမှုနည်းလမ်း)။ မိမိဘာသာ ရှင်သန်နိုင်သော ဘက်တီးရီးယားများ၏ အရေအတွက် တိုင်းတာမှုနည်းလမ်း- ခွက်ထဲလောင်းထည့်သည့် နည်းလမ်း။ စမ်းသပ်မှု ရလဒ်များ- ဘက်တီးရီးယား ကာကွယ်မှု လုပ်ဆောင်ချက်တန်ဖိုး2နှင့်အထက်၊ ဘက်တီးရီးယား ဖယ်ရှားပေးနိုင်စွမ်း 99.9%။ ဘက်တီးရီးယား အရေအတွက်နှင့် ပတ်ဝန်းကျင် အခြေနေများအပေါ် မူတည်၍ အရေအတွက်က အန္တရာယ်များသော အခြေအနေသို့ မြန်ဆန်စွာ မတိုးပွားလာနိုင်ဟု အာမခံချက် မပေးနိုင်ပါ။ စမ်းသပ်မှု နံပါတ်- 003557-1 ၊ 003557-2
*4 Panasonic က ပြင်ဆင်ထားသော ဒေတာ။
*5 Panasonic က ပြင်ဆင်ထားသော ဒေတာ။ ရေခဲခံအကန့်နှင့် ရေခဲသေတ္တာအကန့် နှစ်ခုစလုံးအတွက် အပူချိန်ကို [MED] အဖြစ် သတ်မှတ်ထားမှသာလျှင် ECONAVI က အလုပ်လုပ်ပါသည်။
Capacity: 322 L (MS IEC 62552:2011(IEC 62552:2007))
Door Material: Steel (Silver)
Prime Fresh with its independent storage case, keep meat and fish fresh longer without defrosting.
Ag Clean deactivates bacteria and suppresses odors in the refrigerator.
ECONAVI saves energy with four types of sensors.
INVERTER adjusts power via flexible control of the compressor.
Gross Capacity (IEC 62552:2007)
Storage Capacity (IEC 62552:2007)
Electric PCB Control
IEC 60335-1, IEC 60335-2-24
Twin Ice Trays
1-2 Tempered Glass Tray
Yes (Outside of fridge door/ Electrostatic Touch)